Asa-Soratra : Tantaran’i JJ Rabearivelo no asehon’ny « Hotsaka » -
AccueilVaovao SamihafaAsa-Soratra : Tantaran’i JJ Rabearivelo no asehon’ny « Hotsaka »
Asa-Soratra : Tantaran’i JJ Rabearivelo no asehon’ny « Hotsaka »
08/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
« L’oragé », asa soratr’ilay teratany frantsay Douna Loup fa nadikan’i Johary Ravaloson tamin’ny teny malagasy. Tantaran’i JJ Rabearivelo no anisan’ireo asongadin’ilay boky mitondra ny lohateny hoe « Hotsaka », nampahafantarina omaly tetsy amin’ny trano fivarotam-boky « Mille-feuilles » tetsy Behoririka. Voaresaky ny mpanoratra ao anatin’ilay boky natontan’ny trano printy « Dodo Vole » ity ny fahatanoran’i JJ Rabearivelo, mpanoratra sy poeta malagasy, niaina nandritra ny vanim-potoanan’ny fanjanahantany. Ampahany ao anatin’ny tantara voarakitra ao anatin’ny « Hotsaka » ny fihaonana teo amin’ity mpanoratra ity sy Esther Razanadrasoa, izay mpanoratra efa nanana ny lazany ihany koa tamin’izany fotoana izany. Asongadin’ny tantara ny fifandraisana nisy teo amin’ireo mpanoratra roa samy manana ny vanim-potoana niainany ireto, satria dia zokin’i JJ Rabearivelo 10 taona i Esther Razanadrasoa. Niainga tamin’ny fanirian’i JJ Rabearivelo ho tonga kalaza eo amin’ny asa soratra ny fihaonana, ary niangaviany hanampy azy amin’izany tanjona izy ity andriambavilanitra mpanoratra ity. Tsy nandà izany ity farany, ary tsy nisalasala nizara ny traikefany taminy. Tsy nijanona teo amin’ny tontolon’ny asa soratra anefa ny fifandraisan’izy roa fa niitatra tamin’ny fifankatiavana. Nitovy rahateo ny tandin-dokanga teo amin’izy roa, satria samy mpanoratra mpanadala ny teny malagasy nefa nahafehy ihany koa ny fanoratana tamin’ny teny vahiny, indrindra tamin’ny teny Frantsay. « Fanomezam-boninahitra ireo mpanoratra malagasy manana ny lazany, ary mbola fanentanana ny Malagasy amin’izao vanim-potoana izao hirona amin’ny vaky boky no namoahana ny Hotsaka », araka ny fanamarihan-dRavaloson Johary, mpanoratra sady tompon’andraikitry ny trano printy Dodo Vole. « Antenaiko fa ahaliana ny Malagasy ny hamaky ny votoatiny sy ny tohin’ny tantaran’ny mpanoratra malagasy andrarezina, na teto Madagasikara teo anivon’ny frankôfônia izany », hoy hatrany ny mpanoratra.
Mbola velona araka izany ny boky sy ny asa soratra Malagasy, na dia matetika miferitr’aina amin’ny halafosan’ny fanotana boky aza ny mpanoratra. Profon’izany ny fivoahan’ity « Hotsaka » ity, izay nambaran’ny mpanoratra fa haparitaka amin’ireo trano fivarotam-boky eto an-drenivohitra.
Minisitry ny Fitsarana : “ Fanalam-baraka ny Fitsarana Malagasy no nataon’i Houcine Arfa”
Nitondra fanazavana mazava mikasika an’ilay gadra nandositra izay miezaka manely vaovao tsy marina ny minisiteran’ ny Fitsarana omaly, ambaran’ izy ireo fa « mitsipaka tanteraka ireo rehetra izay voalazan’ingahyArfa Houcine izay miendrika ho fanasoketana sy ...Tohiny
Me Hubert Raharison : Fanakorontanana saim-bahoaka ny raharaha Houcine